News | ShweBiz.com | Page 9
Money Transfer from Myanmar to Australia via Western Union
Posted by shwebiz Exchange Rate, News
ျမန္မာျပည္မွ ၾသစေတးလ်သို႕ Western Union ျဖင့္ေငြလြဲလို႕ရေနပါၿပီ။ ေငြလြဲသူမွ မိမိတို႕နီးစပ္ရာ Western Union Agent မွ လႊဲပို႕၍ ေငြလက္ခံသူဖက္မွလည္း နီးစပ္ရာ Agent တြင္ထုတ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႕ နီးစပ္ရာ KBZ, CB, AYA, YOMA စသည့္ ဘဏ္မ်ားတြင္ Western Union Service ကိုစံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
Skill Migration များကိုတင်းကျပ်ရန် Occupation List အသစ်ထွက်ရှိ
457 ဗီဇာဖျက်သိမ်းပြီး ဗီဇာအသစ် ၂ မျိုးဖြင့်အစားထိုးပြီးနောက် 457 ဗီဇာလျှောက်ထားသူများပါမက General Skill Migration များကိုပါတင်းကျပ်ရန်အတွက်လည်း Occupation List အသစ်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ Skilled Occupation List သည် Australia မှာလိုအပ်နေသည့် ကျွမ်းကျင်မှုအလိုက် Skilled Visa များကိုထုတ်ပေးသည့်အရေးပါသော List ဖြစ်သည်။ ယခင် 457 ဗီဇာများအတွက်ယခင်က Consolidated Sponsored Occupation List (CSOL) အလုပ်အကိုင်အမျိုးအစားပေါင်း ၆၅၁ မျိုးရှိခဲ့ရာမှမှ ယခု ၄၃၅မျိုးသို့လျှော့ချလိုက်သည်။ အမည်ကိုလည်း Short-term Skilled Occupations List (STSOL) သို့ပြောင်းလဲလိုက်သည်။ အသေးစိတ်ကို Combined list of eligible skilled occupations တွင် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ […]
Australian Citizenship ရရှိရန် ပိုကျပ်တော့မည်
Australian Citizenship ဖြစ်ဖို့ အရင်ကထက်ပိုမိုခက်ခဲတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ 457 ဖျက်သိမ်းမှု နောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့် သြစတေးလျဝန်ကြီးချုပ်မှ Citizenship Requirement အသစ်များကိုမကြာမီထုတ်ပြန်ရန်ပြင်ဆင်လျှက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ English ဘာသာစကား ရေး-ဖတ်-ပြော-နားလည်နိုင်စွမ်း စစ်ဆေးမည်၊ Australian Values သြစတေးလျအကြောင်းသိရှိမှု စာမေးပွဲ နှင့် လျှောက်ထားခွင့်အတွက် ယခင်ကထက်နှစ်ပိုများများစောင့်ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ အလုပ်အကိုင်ရှိမရှိ၊ ကလေးများကိုကျောင်းအပ်ထားမှုရှိမရှိ၊ Community Organisation များထဲတွင်ဝင်ရောက်ထားမှုရှိမရှိ စသည့် Australian Society ထဲသို့ မည်မျှထဲထဲဝင်ဝင် ပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့သည်လဲဆိုသည်များကို သက်သေပြရဖွယ်ရှိမည်။ဝန်ကြီးချုပ် Turnbull မှ ယခု Citizenship အပြောင်းအလဲကို ယခု ကြာသပတေးနေ့တွင် ထုတ်ပြန်မည်ဟုပြောကြားသည်။ Ref#1 https://au.news.yahoo.com/a/35089759/citizenship-tests-to-become-tougher-under-pms-immigration-and-visa-crackdown Ref#2 http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/speak-english-respect-our-values-malcolm-turnbulls-next-citizenship-crackdown-20170419-gvnq0y.html
457 visa ဖျက်သိမ်း
ယနေ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁၈ရက်နေ့ သြစတေးလျဝန်ကြီးချုပ် Malcolm Turnbull မှ သြစတေးလျအစိုးရမှ 457 ဗီဇာကို ယနေ့မှစ၍ ပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အခြား “temporary visa” အသစ်တစ်မျိုးဖြင့် အစားထိုးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အင်္ဂလိပ်စာ ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်ကိုမြှင့်တင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ Work History နှင့် Police Check ကို ကြပ်မတ်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အမှန်တကယ် Skills Shortages နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိ 457 ဗီဇာကိုင်ဆောင်ထားသူများ ဆက်လက်နေထိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းများတွင် Australian များကို ဦးစားပေးခန့်အပ်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း အစရှိသည်ဖြင့် ထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်သည်။ 457 ဗီဇာသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အလျှောက် Skilled Foreign Worker များကို ခေါ်ယူရန် အရေးပါသည့် ဗီဇာအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ယခု […]
တိသရဏဝိဟာရကျောင်းကို 173 Albert Road, Middle Swan 6056 သို့ပြောင်းရွှေ့လိုက်ပါပြီ။ ဆရာတော်နှစ်ပါးမှာ ကျောင်းနေရာသစ်တွင် စတင်သီတင်းသုံးနေပြီဖြစ်ပါသည်။ 17-April-2017 Sunday တွင်ပစ္စည်းများအားလုံးကို အပြီးပြောင်းရွှ့မည်ဖြစ်ပါသည်။ လက်ကျန်စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းများကို 23-April-2017 နေ့တွင် လက်ရှိ Forrestfield နေရာမှ နောက်ဆုံးထား၍ ရှင်းလင်းပေးရပါမည်။ Tisarana Vihara Monastery is moved to 173 Albert road, Middle Swan 6056. Our2residence monks have started residing at the new location. Everything will be moved out by 17-April-2017 Sunday. The […]
တိသရဏ ကျောင်းသစ်ရွှေ့ပြောင်း လုပ်အားဒါနကုသိုလ်
တိသရဏ ဝိဟာရ ကျောင်းနေရာသစ်သို့ လက်ရှိကျောင်းမှ ပစ္စည်းများကို (သင်္ကြန်ပွဲအတွက်သုံးစွဲရန်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများမှအပ) ၈/၄/၂၀၁၇ စနေနေ့တွင်ရွှေ့ပြောင်းသယ်ဆောင်ရန်အစီအစဉ်ရှိ ပါ၍ ရွေ့ပြောင်းရန်အတွက်ဖြစ်စေ၊ သန့်ရှင်းရေးအတွက်ဖြစ်စေ စွမ်းနိုင်သမျှ လူအား၊ ဉာဏ်အား -လုပ်အားဒါနပြုနိုင်ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ အငှား Truck 8:00am လောက်တွင်ကျောင်းသို့ယူလာ၍ စတင်ရွှေ့ပြောင်း မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၉/၄/၂၀၁၇ တနင်္ဂနွေနေ့တွင်လည်းလိုအပ်သည်များလုပ်ဆောင်ရန်လုပ်အားဒါနလိုအပ်ပါသည်။ ၁၄/၄/၂၀၁၇ သောကြာနေ့တွင်သင်္ကြန်ပွဲအတွက် Stage စင်ပြုလုပ်ပါမည်။ ၁၇/၄/၂၀၁၇ တနင်္လာနေ့တွင်လက်ကျန်ပစ္စည်းအားလုံးကို ကျောင်းနေရာသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်အစီအစဉ်ရှိပါသည်။ ၁၆/၄/၂၀၁၇ သင်္ကြန်ပွဲတော်သို့ လက်ရှိကျောင်းနေရာတွင် လာရောက်ဆင်နွဲသည့်အခါတွင်လည်း လုပ်အားဖြင့်ကူညီရန် အဆင်မပြေသည့်တိုင်အောင် သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊ ကားများကိုစည်းကမ်းတကျရပ်ခြင်း၊ ကားလမ်းပိတ်ဆို့မရပ်နား ခြင်း တို့ဖြင့်လည်းကောင်း ဝေယာဝစ္စ္စအသင်းကို ကူညီကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ တိသရဏအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ Source: Tisarana Perth WA Australia FB Page